အစာအိမျရောဂါရှိတဲ့သူတှကေ ဘာတှရှေောငျသငျ့လဲ? – စှယျစုံသုတ
အရငျဆုံး အစာအိမျရောဂါရှိတဲ့သူတှအေနနေဲ့ ပုံမှနျ လူတှလေို မဟုတျဘဲ စားသတိရှိသငျ့တယျဆိုတာ သတိပေးပါရစေ။။ အစားမတျောတလုပျ အသှားမတျောတလှမျး ဆိုတာလဲရှိသေးတယျမလား။
ကိုယျပဲမဆငျမခွငျစားလိုကျမိခဲ့ရငျ အစာအိမျ ဝဒေနာ တှဖွေဈတဲ့ ဗိုကျအောငျ့တာ ရငျပူတာ ပြို့အနျတာ လထေတာ ရငျပွညျ့ရငျကယျတာ မစားခငျြမသောကျခငျြ တာတှကေို ကိုယျပဲခံစားရမှာလေ။ အခနျ့မသငျ့ရငျ ဝမျးပကျြတာပါဖွဈနိုငျသေးတာပေါ့။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ အစာအိမျဝဒေနာမှာဆိုရငျ အစာအိမျ ဘေးတလြောကျ ရောငျရမျးတာကအဖွဈမြားပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈတာကရကျတိုဖွဈနိုငျသလို ကွာရှညျနတော မြိုးလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုရောငျရမျးမှုကနတေဆငျ့ အစာအိမျမှာအနာဖွဈတာ နောကျဆုံးအလုံးအကွိတျ ကငျဆာထိပါဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မိမိရဲ့ အစာအိမျ ထဲကိုရောကျစမေယျ့အစားအစာတှပေျေါ မူတညျပွီး အစာအိမျနဲ့အူလမျးကွောငျးတလြောကျ ကောငျးမကောငျး က အဆုံးအဖွတျပေးနမှောပါ။ ကိုယျ့ရဲ့နထေိုငျမှု စားသောကျမှုပုံစံကွောငျ့အစာအိမျကို ဒုက်ခမပေးမိဖို့ လိုပါတယျ။
ကဲဒါဆို အစာအိမျရောဂါရှိသူတှမှော ဘာတှရှေောငျကွဉျရမလဲဆိုတာကွညျ့ရအောငျနျော။
၁။ အဆီပါဝငျမှုမြားတဲ့ အစားအသောကျတှကေို ပထမဆုံးလြော့သငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုအစားအစာတှကေ အစာအိမျဘေးနံရံက ဆဲလျလေးတှေ ရောငျရမျးမှုကို ပိုဆိုးစပေါတယျ။
၂။ နောကျတဈခုက အစာအိမျက အကျစဈထှကျတာကို လှုံ့ဆျောပေးမယျ့ အစားအစာတှကေို လြော့စားသငျ့ ပါတယျ။ ဥပမာ-အပူအစပျ ကျောဖီ ခဉျြတဲ့အသီးအနှံတှေ အခြိုရညျတှေ အငနျမြားတဲ့အစားအစာတှကေို လြော့စားဖို့လိုပါတယျ။
၃။ အရကျသောကျတာနဲ့ဆေးလိပျကလညျး အစာအိမျ အတှကျ ထိခိုကျစနေိုငျလို့ လြော့နိုငျရငျ အကောငျးဆုံးပါ။
၄။ ပွငျပကဝယျသောကျတဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ Asprin ဆေးပွာတှလေုံးဝမသောကျသငျ့ပါဘူး။
၅။ စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့အခါမှာလညျး အကျဆဈထှကျတာ လှုံ့ဆျောပေးတဲ့အတှကျ စိတျဖိစီးမှုလြော့ခနြိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။
၆။ ပိုပွီးအရေးကွီးတာကတော့ အစာအိမျမှာ H.pylori လို့ချေါတဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးဝငျရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသပွီး ပိုးသတျဆေးကို သခြောသောကျသငျ့ပါတယျ။ နောကျပွီး အစားအသောကျတှစေားတဲ့အခါ သနျ့ရှငျး လတျဆတျဖို့နဲ့ စားပွီးတိုငျး လကျကို သခြော ဆေးကွောဖို့ကလညျး အရေးကွီးပါသေးတယျ။
ကဲဒါဆိုအစာအိမျမှာ အနာပေါကျတဲ့သူတှေ အတှကျရော?
တခြို့လူတှမှော အစာအိမျရောငျတာနဲ့အတူ အစာအိမျမှာ အနာဖွဈတာပါတှရေ့မှာပါ။ ဒီလိုအနာကတဆငျ့ အစာအိမျ အနာပေါကျတာ သှေးယိုစီးတာ သှေးအား နညျးတာတှပေါ နောကျဆကျတှဲ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈခဲ့ရငျတော့ ပိုပွီးဂရုစိုကျဖို့ လိုပါတယျ။ အစာ ပြော့ပြော့စားသငျ့ပွီး အနာအတှကျ ဗီတာဗငျအားဆေး တှေ ပါမှီဝဲသငျ့ပါတယျ။
ဒါဆို အစာအိမျဝဒေနာရှိသူတှေ ဘာတှသေခြော စားသငျ့လဲ။
အဆီပါဝငျမှုနညျးတဲ့ ငါးကွကျသားစတဲ့ အသားမြိုး
အခဉျြဓာတျ နညျးပါးတဲ့ အစားအသောကျတှကေို ပိုပွီး စားသုံးသငျ့ပါတယျ
ကုသမှုအနနေဲ့ကတော့ အစာအိမျဝဒေနာဖွဈတဲ့ အကွောငျးပျေါမူတညျပွီး ဆရာဝနျနဲ့ ထိထိရောကျရောကျကုသဖို့လိုအပျပါတယျ။
တခြို့ဝဒေနာတှကေ antacids နဲ့ PPI လို့ချေါတဲ့ အကျဆဈထှကျတာနညျးစတေဲ့ဆေးတှသေောကျသုံးရုံနဲ့ ပြောကျကငျးသှားပမေယျ့ တခြို့သောဝဒေနာတှမှော ပိုးသတျဆေးရကျရှညျသောကျရတာမြိုးလဲ ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါတှနေဲ့မှမသကျသာရငျ အနာအတှကျ မှနျပွောငျး ကွညျ့ရတာမြိုးတှထေိလဲရှိနိုငျပါတယျ။
ဘာအကွောငျး ကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ ဆောကျနဲ့ထှငျးရမယျ့နရော ပုဆိနျနဲ့ မထှငျးမိဖို့ကအရေးကွီးဆုံးပါ။ ဒါကွောငျ့ စာဖတျသူတှေ အားလုံး အစာအိမျအောငျ့တယျဆိုတိုငျး ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနမေိအောငျ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျနျော။
အရင်ဆုံး အစာအိမ်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ပုံမှန် လူတွေလို မဟုတ်ဘဲ စားသတိရှိသင့်တယ်ဆိုတာ သတိပေးပါရစေ။။ အစားမတော်တလုပ် အသွားမတော်တလှမ်း ဆိုတာလဲရှိသေးတယ်မလား။
ကိုယ်ပဲမဆင်မခြင်စားလိုက်မိခဲ့ရင် အစာအိမ် ဝေဒနာ တွေဖြစ်တဲ့ ဗိုက်အောင့်တာ ရင်ပူတာ ပျို့အန်တာ လေထတာ ရင်ပြည့်ရင်ကယ်တာ မစားချင်မသောက်ချင် တာတွေကို ကိုယ်ပဲခံစားရမှာလေ။ အခန့်မသင့်ရင် ဝမ်းပျက်တာပါဖြစ်နိုင်သေးတာပေါ့။
ပုံမှန်အားဖြင့် အစာအိမ်ဝေဒနာမှာဆိုရင် အစာအိမ် ဘေးတလျောက် ရောင်ရမ်းတာကအဖြစ်များပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာကရက်တိုဖြစ်နိုင်သလို ကြာရှည်နေတာ မျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုရောင်ရမ်းမှုကနေတဆင့် အစာအိမ်မှာအနာဖြစ်တာ နောက်ဆုံးအလုံးအကြိတ် ကင်ဆာထိပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ အစာအိမ် ထဲကိုရောက်စေမယ့်အစားအစာတွေပေါ် မူတည်ပြီး အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းတလျောက် ကောင်းမကောင်း က အဆုံးအဖြတ်ပေးနေမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှု စားသောက်မှုပုံစံကြောင့်အစာအိမ်ကို ဒုက္ခမပေးမိဖို့ လိုပါတယ်။
ကဲဒါဆို အစာအိမ်ရောဂါရှိသူတွေမှာ ဘာတွေရှောင်ကြဉ်ရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်။
၁။ အဆီပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပထမဆုံးလျော့သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုအစားအစာတွေက အစာအိမ်ဘေးနံရံက ဆဲလ်လေးတွေ ရောင်ရမ်းမှုကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
၂။ နောက်တစ်ခုက အစာအိမ်က အက်စစ်ထွက်တာကို လှုံ့ဆော်ပေးမယ့် အစားအစာတွေကို လျော့စားသင့် ပါတယ်။ ဥပမာ-အပူအစပ် ကော်ဖီ ချဉ်တဲ့အသီးအနှံတွေ အချိုရည်တွေ အငန်များတဲ့အစားအစာတွေကို လျော့စားဖို့လိုပါတယ်။
၃။ အရက်သောက်တာနဲ့ဆေးလိပ်ကလည်း အစာအိမ် အတွက် ထိခိုက်စေနိုင်လို့ လျော့နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။
၄။ ပြင်ပကဝယ်သောက်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ Asprin ဆေးပြာတွေလုံးဝမသောက်သင့်ပါဘူး။
၅။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါမှာလည်း အက်ဆစ်ထွက်တာ လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ချနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
၆။ ပိုပြီးအရေးကြီးတာကတော့ အစာအိမ်မှာ H.pylori လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး ပိုးသတ်ဆေးကို သေချာသောက်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး
အစားအသောက်တွေစားတဲ့အခါ သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်ဖို့နဲ့ စားပြီးတိုင်း လက်ကို သေချာ ဆေးကြောဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။
ကဲဒါဆိုအစာအိမ်မှာ အနာပေါက်တဲ့သူတွေ အတွက်ရော?
တချို့လူတွေမှာ အစာအိမ်ရောင်တာနဲ့အတူ အစာအိမ်မှာ အနာဖြစ်တာပါတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုအနာကတဆင့် အစာအိမ် အနာပေါက်တာ သွေးယိုစီးတာ သွေးအား နည်းတာတွေပါ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ပိုပြီးဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အစာ ပျော့ပျော့စားသင့်ပြီး အနာအတွက် ဗီတာဗင်အားဆေး တွေ ပါမှီဝဲသင့်ပါတယ်။
ဒါဆို အစာအိမ်ဝေဒနာရှိသူတွေ ဘာတွေသေချာ စားသင့်လဲ။
အဆီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ငါးကြက်သားစတဲ့ အသားမျိုး
အချဉ်ဓာတ် နည်းပါးတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပိုပြီး စားသုံးသင့်ပါတယ်
ကုသမှုအနေနဲ့ကတော့ အစာအိမ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တချို့ဝေဒနာတွေက antacids နဲ့ PPI လို့ခေါ်တဲ့ အက်ဆစ်ထွက်တာနည်းစေတဲ့ဆေးတွေသောက်သုံးရုံနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားပေမယ့် တချို့သောဝေဒနာတွေမှာ ပိုးသတ်ဆေးရက်ရှည်သောက်ရတာမျိုးလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့မှမသက်သာရင် အနာအတွက် မှန်ပြောင်း ကြည့်ရတာမျိုးတွေထိလဲရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘာအကြောင်း ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆောက်နဲ့ထွင်းရမယ့်နေရာ ပုဆိန်နဲ့ မထွင်းမိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတွေ အားလုံး အစာအိမ်အောင့်တယ်ဆိုတိုင်း ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနေမိအောင် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။
အာသီးရောငျ ၊ လညျခြောငျးနာလြှငျ
တရုတျတောငျပိုငျးတှငျ ကိုဗဈ ပွနျလညျ ကူးစကျမှုမြားကွောငျ့ လယောဉျခရီးစဉျ ရာနှငျ့ခြီ၍ ဖကျြသိမျးခဲ့ရ